Akaremara veteran wows mwenga nekutamba kwekutanga
Sgt. Joe Johnson, aishandira muAfghanistan, akabvisa kushamisika kwemuchato mudzimai wake, Michelle, haazombokanganwa.
Akabatana naye pakutamba kwavo kwekutanga vasina wiricheya!
Maererano ne WXIN, Joe, 27, akatambura a musana kuipa mutsaona yemudhudhudhu achangodzoka kubva mhiri kwemakungwa. Akatambura nepashure pekushungurudzika kushungurudzika mushure mekushandira muAfghanistan uye akatasva midhudhudhu kumhanya.
Joe anoti aifamba nekumhanyisa mumugwagwa wakakombama. Magirazi ake ezuva akapeputswa uye anga asina kupfeka ngowani.
Akaoma mitezo kubva pachipfuva zvichidzika uye akavharirwa ku a wiricheya. Joe anoti Michelle yaive yakakura rutsigiro system kwaari.
Anoti iye aive aripo kubva pazuva rekutanga kusvika zana uye haana kumbobva parutivi rwake. Akawedzera kuti aisakwanisa kufunga nezvemumwe munhu waaida kuva naye.
Nguva pfupi yapfuura, vaviri vacho vakavimbisana!
[btn link = "http://fox2now.com/2014/11/13/paraplegic-veteran-surprises-bride-with-wiricheya-free-dance / "target =" _ blank "] Verenga Chinyorwa Chekutanga [/ btn]
Turbo: Chihuahua Akazvarwa Asina Makumbo Anotanga Kutenderera
Akaremara App Anogadzira Anogadzira App yeVashandisi veWiricheya